Fitsaboana ny homamiadan'ny pancreatic & Bile Duct - Proton any California
Fomba fitsaboana ny Proton ho an'ny fitsaboana amin'ny homamiadan'ny pancreatic sy Bile Duct
Miadia amin'ny homamiadan'ny Pancreatic & Bile Duct miaraka amin'ny Precision toy ny Laser
Teknolojia fanaraha-maso pensilihazo pensilihazo avy any California Protons dia fitsaboana tsara sy mahomby amin'ny homamiadan'ny pancreatic sy bile duct izay ahafahan'ny dokoteranay mikendry ny fivontosan'ny fantsom-panafody sy ny fantsom-panafody miaraka amin'ny taratra doka avo ao amin'ity faritra saro-pady sy sarotra ity.
Raha ampitahaina amin'ny fitsaboana fitsaboana pasifika pasifika taloha ho an'ny homamiadan'ny pancreatic & bile duct, ny teknolojia fanodinam-baravarankely fandefasana ny fikarakarana taratra ho an'ny homamiadana pancreatic sy bile duct ao anatin'ny 2 milimetatra ary amin'ny fikarakarana tanteraka. Azontsika atao ny mamely ny fivontosan'ny fivontosana amin'ny alàlan'ny fivontosana ary manamaivana ny fihanaky ny vatan'ny taolana mahasalama. Zava-dehibe izany ho an'ny marary homamiadana pankaremaso satria ny mampihena ny taratra manakaiky ny tavy mahasalama dia zava-dehibe satria eo akaikin'ny sela sy taova saro-pady sy sela ny pancreas anao. Ny fampihenana ny poizina mifandraika amin'ny taratra dia mampitombo ihany koa ny fahafahan'ny marary mameno ny fitsaboana amin'ny fampiatoana na fanemorana kely kokoa.
Kanseran'ny pankreatika sy lalan-dra
Proton Therapy fitsaboana amin'ny antsipirihany
Kankalan'aretina baomba (cholangiocarcinoma)
Arovy ny fonao, ny vavony, ny voa, ny tsinay kely ary ny tadina
Tazano ny fiainanao tsara mandritra ny fitsaboana homamiadana pankreasika sy bile
Mampihena ny voka-dratsin'ny fitsaboana, ao anatin'izany ny mie, mandoa, aretim-po, ny cramping, malabsorption (tsy fahaizana mamontsina otrikaina avy amin'ny sakafo), ny fivalanana ary ny dehydration
Raha oharina amin'ny taratra X-ray, ny fitsaboana proton ho an'ny homamiadan'ny pancreatic dia mampihena ny fihanaky ny taratra amin'ireo taova lehibe amin'ny alàlan'ny:
Ny fihenan'ny taratra eo amin'ny tadin'ny hazondamosina1
Mihena ny fatran'ny taratra ao amin'ny aty1
Soa azo avy amin'ny fitsaboana Proton ho an'ny homamiadan'ny pancreatic & Bile Duct
Ny fitsaboana protonolika mandroso dia mamela ny dokotera amin'ny fomba voafantina tsara kokoa amin'ny taratra fantsom-panafody amin'ny tsinay sy ny tazo mamaivay ary ny fihanaky ny tsiranoka marefo ary ny fantsony. Izany dia naseho mba hanomezana fitsaboana haingana kokoa noho ny fitsaboana taratra X-ray na dia amin'ny toe-javatra sarotra aza.
Ny dokotera dia afaka mandefa fatra fitsaboana lehibe amin'ny sela mihatra amin'ny sela mivalona, ​​tsy mandany manodidina ireo taova mihaingo sy sela marefo, toy ny atinao, ny fonao, ny voa, ny tsinay kely ary ny tadin'ny hazondamosina. Tena zava-dehibe ny fandefasana an'ireny tavy mahasalama ireny satria ny fahasimbana amin'ireo rafitra saro-pady ireo dia mety hiteraka fery, fivontosana, rà anatiny ary tsy fahombiazana.
Ny teknika manokana dia azo ampiasaina miaraka amin'ny fitsaboana proton mba hikendry ireo rafi-pandehanana sy taova mivezivezy kokoa. Zava-dehibe ho an'ny fitsaboana ny homamiadan'ny pancreatic izany.
Tsy toy ny teknolojia taloha, ny drafi-pitsaboana dia azo ampidirina ao anaty solosaina ary vita ao anatin'ny iray minitra. Ny fitsaboana ihany koa dia tsy invasive ary malefaka ahafahan'ny marary miverina haingana amin'ny asany isan'andro.
Fitsaboana fitsaboana Proton ho an'ny homamiadan'ny pancreatic & Bile Duct
Raha ny fandidiana ny pancreatectomy na ny fizotran'i Whipple amin'ny ankapobeny dia atokana ho an'ny homamiadana pankaratrandratra amin'ny alàlan'ny fiandohan'ny vanim-potoana (azo jerena) izay tsy niparitaka, ny fitsaboana taratra dia mety hokasaina ary koa hiantoka ny famonoana ireo sela rehetra amin'ny homamiadana. Ny taratra sy ny fitsaboana simika dia mety ampiasaina koa amin'ny marary tsy mahazaka fandidiana. Ny safidy fitsaboana koa dia voakasiky ny karazana homamiadan'ny taovam-pankasitrahana, ny taonany, ny fahasalamana amin'ny ankapobeny sy ny safidin'ny tena manokana.
Amin'ny ambaratonga I homamiadana pankasitraka dia hita ao amin'ny pankréas ihany fa ny fitomboan'ny eo an-toerana dia misy fiantraikany mihoatra ny sela iray monja. Raha ny fandidiana hanaisotra ny fivontosana no fitsaboana mahazatra indrindra, ny fitsaboana ny taratra ho an'ny atiny amin'ny homamiadana pancreatic dia matetika no ampiasaina mba hiantohana ny hamonoana ireo sela rehetra amin'ny homamiadana.
Ny homamiadana pancreatic amin'ny ambaratonga II dia niparitaka tany ivelan'ny saribenjy na ny lymph node. Raha ny fandidiana hanaisotra ny fivontosana no fitsaboana mahazatra indrindra, ny fitsaboana taratra ho an'ny diaben'ny dingana II homamiadana pancreatic dia matetika no ampiasaina mba hahazoana antoka fa maty daholo ny sela homamiadana ary hampihena ny mety hisehoan'ny homamiadana na miverina.
Ny kansera dia niparitaka any anaty lalan-drà na nerveo lehibe saingy tsy mbola voatsindrona na misy fiantraikany amin'ny taova hafa. Raha ny fandidiana hanaisotra ny fivontosana no fitsaboana mahazatra indrindra, ny dokotera dia tsy mahavita manala izany rehetra izany. Amin'ny ambaratonga III, ny homamiadana pankréasika dia mandroso eo an-toerana ary ny taratra dia mety handroso amin'ny fikasana hampihena ny fivontosana, hametra ny fitomboana fanampiny ary hampihena ny mety hihanaky ny faritra hafa amin'ny vatana.
Amin'ny dingana IV ny homamiadana pankreasitra, ny homamiadana dia niparitaka nanomboka tamin'ny pancreas ka misy taova hafa. Ny fitsaboana zava-mahadomelina toy ny kemoteram-bolo no fitsaboana lehibe indrindra atolotry ny marary manana homamiadana pancreatic. Na dia azo atao aza ny fandidiana, dia tsy azo esorina tanteraka ireo kansera ireo. Ny fitsaboana taratra ny proton dia mety ampiasaina hampihenana ny fivontosana.
Ny homamiadana pancreatic miverimberina
Vokatra pancreatic & Bile Duct Proton ary vokatra maharitra
Ny fitsaboana fitsaboana Proton ho an'ny homamiadana pancreatic ao amin'ny California Protons cancer Therapy Centre any San Diego dia mety hanolotra valiny mitovy amin'izany amin'ny taratra X-ray manara-penitra, raha mampihena ny vokatra maharitra sy mampidi-doza amin'ny fiainana toy ny ulceration, perforation, ny rà anatiny ary ny tsy fahombiazan'ny taova. amin'ny fahasimban'ny taratra amin'ny atiny, voa ary gastrointestinal taova. Mety hihena koa ny kansera faharoa any aoriana any noho ny fihenan'ny tara-pahazavana amin'ny sela sy ny taova mahasalama manodidina anao.
Fikarohana fikarohana manohana fitsaboana Proton ho an'ny homamiadan'ny pancreatic & Bile Duct
1Ny fitsaboana Proton dia manolotra ny fampihenan-dàlana ara-dalàna amin'ny marary mahazo ny radioterapi-post-operative ho an'ny homamiadan'ny lohan'ny pankreasika
Ny dingana ianarako momba ny famoronan-dàlana vita amin'ny fomba fohy amin'ny alàlan'ny fitsaboana miaraka amin'ny fitsaboana ny vatan'ny proton ary ny capecitabine ho an'ny adenocarcinoma dav ho an'ny tazo azo resahina.